नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): आखिर उनी नयाँ नेपालका दिन फर्केका "प्रचण्ड" न परे हगी !
आखिर उनी नयाँ नेपालका दिन फर्केका "प्रचण्ड" न परे हगी !
सर्बोच्च अदालतको आदेश पछी सबैले सुरक्षाकर्मी र गाडी फिर्ता गर्दै, तर सत्र हजार मान्छे मारेर प्रचण्ड बनेका पुष्पकमल दाहालले फिर्ता नगर्ने रे ! नेपाल प्रहरीका २६ र सशस्त्रका ४५ सुरक्षाकर्मी अगाडि पछाडि लगाएर राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्री भन्दा पनि बढी शान देखाएर हिंड्न मन पराउंछन् बहुरुपी प्रचण्ड, उनलाई सर्बोच्च अदालतको आदेशले के छुन्थ्यो र, फेरी त्यसै माथि उनकै बाबुरामको राज चलेका बेला !
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उनको सुरक्षामा रहेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता नपठाउने भएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा माओवादी नेताको सुरक्षा सरकारले गर्ने उल्लेख भएको भन्दै सुरक्षाकर्मी फिर्ता नपठाउने उनका छोरा प्रकाशले जनाए । 'विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सुरक्षाकर्मी फिर्ता नपठाइएको हो,' उनले भने । दाहालको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीका २६ र सशस्त्रका ४५ सुरक्षाकर्मी छन् । दाहालको सुरक्षाको पूरा जिम्मा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले लिनुअघि लडाकुले पनि गर्दै आएका थिए । दाहाललाई सबभन्दा सुरक्षा खतरा भएकाले हटाउन नमिल्ने प्रकाशले जनाए । दाहाल आफैंले पनि पटक-पटक आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेको बताउँदै आएका छन् । सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका नेताहरूको सुरक्षाका लागि सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गरी त्यसको व्यवस्था गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले जनाए । 'शीर्ष नेताहरूलाई कस्तो सुरक्षा चाहिन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित नेताहरूसँग छलफल गरी व्यवस्था गर्ने तयारी भएको छ,' उनले भने, 'माओवादी नेताका हकमा भने विभिन्न सम्झौताअनुसार पहिलेकै सुरक्षाकर्मी रहने छन् ।'